Degso Malware Hunter 1.48.0.378 loogu talagalay Windows
Madal: Windows Nooca: 1.48.0.378 Luqadda: English
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (28.38 MB)
Degso Malware Hunter,
Malware Hunter waa barnaamij kaa caawinaya inaad ka difaacdo fayrasyada Malware Hunter waa barnaamij antivirus ah oo aad isticmaali karto hadii aad rabto inaad ka difaacdo kombiyuutarkaaga furin iyo fayrasyo ​​madax adag Malware Hunter, oo ay soo saartay shirkada Glarysoft, asal ahaan waa barnaamij amaan ah oo loogu tala galay inuu adiga awood kuu siiyo inaad iskaaniso oo aad ka saarto fayrasyada kombiyuutarkaaga. Malware Hunter wuxuu adeegsadaa mishiinka aqoonsiga fayraska Avira si loo garto fayrasyada sidaas awgeedna wuxuu ku qaban karaa natiijooyin sax ah. Malware Hunter wuxuu ku siinayaa 3 ikhtiyaar oo iskaan ah oo kala duwan si aad uga baarto fayrasyada.
Iyada oo la adeegsanayo ikhtiyaarka Scan Scan, fayl gaar ah oo fayrasyo ​​had iyo jeer lagu dhejiyo kombiyuutarkaaga lagu baaro.Xulashada Scan-ka oo Buuxda, feylasha iyo galka dhammaan qeybaha kaydinta ee ku xiran kumbuyuutarkaaga waa la maareynayaa waxaana lagu sameynayaa baaritaan guud Xulashada daweynta gaarka loo leeyahay, dhinaca kale, waxay kuu oggolaaneysaa inaad iskaanto fayllada aad cayimay. Malware Hunter wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daalacato feylashaada godoonsan oo aad calaamadeyso feylasha aaminka ah si aad ugu mudnaato. Marka laga reebo iskaanka fayraska iyo ka saarista, Malware Hunter sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo dheeri ah oo faaiido leh.
Muuqaalka dardargelinta kumbuyuutarka ee barnaamijka wuxuu falanqeynayaa sababaha suurtagalka ah ee dib u dhigi kara kombuyuutarkaaga wuxuuna kaa caawinayaa inaad xawaareyso bilowga iyo shaqada kumbuyuutarkaaga adigoo ka takhalusaya arrimahaas. Aaladda nadiifinta waxay ka heleysaa faylasha qashinka aan loo baahnayn iyo qashinka nidaamkaaga, waxay nadiifisaa diiwaankaaga waxayna siineysaa kombuyuutarkaaga niyad jab.Adoo adeegsanaya Malware Hunter, waxaad ka furan kartaa kumbuyuutarkaaga meel bannaan oo lagu keydiyo.
Malware Hunter Noocyada
Cabirka Faylka: 28.38 MB